Maxaa Xalay kala qabsaday Jose Mourinho iyo xiddigaha Juventus???+SAWIRRO – Gool FM
Byare November 8, 2018
(Europe) 08 Nof 2018. Manchester United ayaa xalay guul soo laabasho leh oo muhiim u ahayd ka gaartay Juventus oo mininkeeda joogta kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1.
Jose Mourinho oo soo galay garoonka ciyaarta kaddib ayaa sameeyay fal celin fool xun isagoona dhegta gacanta saartay afkana qaloociyay taa oo aad uga careysiisay xiddigaha Juve iyo waliba taageerayaasha.
Macallinka reer Portugal oo fasiray sababta uu fel celinta aan anshaxa ahayn u sameeyay ayaa sheegay in sagaashanka daqiiqo ay caynayeen taageerayaasha ilaa reerkiisa isla markaana uu dhegta gacanta saartay si uu u maqlo aflagaado dheeri ah.
Sikastaba, Xiddigaha waa wayn ee kooxda reer Talyaani Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci iyo Paulo Dybala oo aad uga carooday falka Mourinho ayaa ku soo xoomay iyagoona waydiinayay inuu fasiraad ka bixiyo.
Ashley Young iyo Sergio Romero ayaa iyana u soo cararay dhanka Mourinho si ay u difaacaan macalinkooda mayilka adag oo garbaha ka istaagay ilaa markii dambe Jose loo waday qolka dhar -badelashada.
Paul Scholes oo si weyn u dhaleeceeyay hab dhaqanka Jose Mourinho
“Santiago Solari waa inuu sii joogaa kooxda ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedka” - Karim Benzema